ဆပ်ပြာထုပ်ကို ဖောက်ခနဲဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ကော်ဖီတခွက်ဖျော်သောက်ချင်စိတ်ပေါက်မိတယ်😍😍😍 ❤ ဆပ်ပြာ အနှစ်လေးတွေရဲ့ အရောင်ကနေ စပြောရမယ်ဆိုရင် ❤coffee & cream ကိုရောထားသလိုလေး😁 ❤အနံ့လေးကတော့ တကယ်ကို coffeeနံ့သင်းနေမှုကြီး ဒါပဲလား ဆပ်ပြာလေးကိုတိုက်ပြီးရင် သေချာကြည့်ပါ ❤မန်ကျည်းသီး အနှစ်လေးတွေဗြုတ်စိလေးတွေထနေရောပဲ ခံစားမှု........ မန်ကျည်းသီးအနှစ်နဲ့ပေါင်းတင်ဖူးသူတိုင်းသိကြသလို ပေါင်းတင်ပြီးရေဆေးချလိုက်တဲ့အချိန် အသားလေးချောမွေ့နေခြင်းက ဆပ်ပြာရဲ့ အသက်ပဲ😍 အသားချက်ချင်းဖြူ သွားတာမျိုးမဟုတ် ဝင်းသွားခြင်းပါနော်😍 သို့သော် နေလောင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့ တကယ်သိသာသွားတယ်❤ ဆပ်ပြာက အမြုပ်ထားလား မမေးနဲ့ 😁 ထလိုက်တဲ့အမြုပ် နဲနဲလေးတိုက်ရုံနဲ့ နူးညံ့အိစက်နေတဲ့ အမြုပ်တွေတထောကြီးကို အပြည့်အဝတွေ့ရှိရမှာပါနော်❤❤ ကဲ....ဒီနေ့ရဲ့ ထိတွေ့မှုလေးကတော့ ဒီလောက်ပါရှင်😍 Stay at home ကာလ ပြီးဆုံးချိန် ဆပ်ပြာ တစ်ခဲကုန်ချိန်မှာ နေလောင်ခြင်းကင်းတဲ့ အသားရေနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်❤❤ ⛄hnin တစၡဲ 4500 ၁ဒါဇင်မှ စကာ လက်ကားရယူနိုင်ပါပြီရှင် 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
Garnier Light Complete Vitamin C Super Essence တင်းတိပ် အမည်းစက်များ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းလိုသူ၊ အသား အရောင် မညီညာမှုများကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် အထိရောက် ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Super Essence ဖြစ်သည်. Vitamin C အဆ ၃၀ ပိုမိုပါ၀င်ပြီး Japanese Yuzu Lemon ကို အခြေခံထုတ်လုပ် ထားတာ ကြောင့် သင့်အသားအရေကို အမြန်ဆုံး ဖြူ၀င်းလာစေပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ် များကိုလည်း လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်. အသားအရေအတွင်း လျင်မြန်စွာ စိမ့်၀င်နိုင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းလုံး၀မရှိပါ. အသားအရေမည်းညစ်ခြင်းကို ၇ ရက်အတွင်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာလာစေသည်. (နေလောင်ခံတစ်ခုခုဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါက ပိုမို ထိရောက်သည်). စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအရ အမည်းစက်များကို ၄ ပတ် အတွင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှေးမှိန်သွားစေသည်. အရေပြား စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အသား အရေ အမျိုးအစားအားလုံး သုံးစွဲနိုင်ပါသည်. 30ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်.
🤗လှတစ်မျက်နှာ‌လေးအတွက် ပေးရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့ရလာဒ်က အရမ်းကိုတန်လွန်းနေပါပြီနော်❣❣❣ 🙄ကိုယ့်မျက်နှာလေး အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီးကြည်လင်ရှင်းသန့်နေတာ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး😍😍 💰ပိုက်ဆံလား ပြန်ရှာမှာပေါ့🤔 ပိုက်ဆံရှိပြီး ရုပ်ဆိုးနေရင် ကိုယိ့ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလေ🤓 🙆အာ့ကြောင့် ဘယ်လောက်စျေးကြီးကြီး ကိုယ့်မျက်နှာ လှပဖို့ ဝယ်သုံးကြတာပေါ့ 😘😘 🙆တျဲတို့လည်း ကိုယ့်မျက်နှာလေး star လေးတွေလိုဖြစ်ချင်ရင် Snail Wish လေး မြန်မြန်လေးလိမ်းဖို့လိုပြီနော်😘 😍မြန်မြန်လိမ်းရင် မြန်မြန်လှမယ်🤗 မြန်မြန်လှဖို့တွက် မြန်မြန်မှာထားတော့🎁🎁🎁 crd လက်လီလက်ကား မှာယူနိုင်ပါပြီ✔ instock မို့ စောင့်စရာ မလိုပါဘူးနော် 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
စကင်းကဲတွေလိမ်းပြီး မထိရောက်ဖူး ထင်နေလား . . . ဒါဆို Nano ‌လေး ကူညီဖို့လိုနေပြီဆိုတာ ‌သေချာပါတယ်. Nano Brush ‌လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရင် အ‌ရေပြားက စကင်းကဲတွေ စုတ်ယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွား‌စေပါတယ်. စကင်းကဲပြီး Nano Spray ‌လေးဖြန်းလိုက်ရင် လိမ်းထားတဲ့ စကင်းကဲတွေရဲ့ ထိရောက်မှု ၂ ဆ တိုးလာ‌စေပါတယ်. Nano Brush တစ်ခု ၁၂၀၀၀ ကျပ်. Nano Spray တစ်ခု ၁၇၀၀၀ ကျပ်. #NanoByFocusBeauty #YourSkinCareBFF 09454549089
Stay At Home 🏢 ကာလကို..လွန်မြောက်ပီး 😷😷mask အုပ်ထားတဲ့...ချစ်တို့မျက်နှာလေးကို 🤷‍♀️ ပြန်ပီး...မြင်လိုက်ရတဲ့..အခိုက်အတန့် 😳😱ဟာခနဲ...ဟင်ခနဲ..ဖြစ်သွားဖို့ 🐌🐌🐌New skiin လိမ်းကြည့်လိုက် 🐌🐌🐌 Crd# 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
🧼🧼ခန္ဓာကိုယ်မှာ နေလောင်ဒဏ်တွေကြောင့် ဆဲလ်သေတွေများပြီး အမဲစက် အမဲကွက်တြွေဖစ်ပေါ်နေပြီလား 🧼🧼 👗👗စကတ်အတိုလေးတွေဝတ်ချင်တာတောင် မဲနေတဲ့ဒူးတွေကြောင့် ယုံကြည်မှုမရြှိဖစ်နေပြီလား 👗👗 👗👗အင်္ကျီလက်ပြတ်‌လှလှလေးတွေ ဝတ်ချင်သော်လည်း အသားအရည်မညီတာကြောင့် မဝတ်ရဲအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆို focus က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် brand လေး BS soap လေးသုံးကြည့်ပါလား 🧼🧼🧼 🧼🧼Soap မှာပါဝင်တဲ့ coffee powder မန်ကျည်းအဆီအနှစ်နဲ့ နနွင်းတို့ကြောင့် အသားအရည်ရဲ့ ပြစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာမှန်သမျှကို ဖြူဝင်းနူးညံ့လာစေမှာပါ 😍😍😍 💥ရေချိုးသည့်အချိန်တိုင်း ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်ထိ နူးညံ့စွာ စက်ဝိုင်းပုံပွတ်၍ အသုံပြုပေးနိုင်ပါတယ်💥💥 💦Soap အနေနဲ့ကော Body ရဲ့ Scrub အနေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ရေချိုးပြီးတိုင်းမှာ body lotion တစ်ခုခုနဲ့တွဲသုံးပေးပါက အသားအရေရဲ့တောက်ပမှုကို ၂ဆမှ ဆအထိ ရရှိခံစားနိုင်ပါပြီနော် 💦💦💦 💦BS soap တစၡဲ 4500💦 💦12ခဲယူ တစ်ခဲအပိုရရှိနိုင်ပါပြီ💦 #crd 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
အလှအပကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြသူတိုင်း Snail Wish Whitening Cream ကိုလဲတန်ဖိုးထားပြီးလိမ်းတတ်ကြပါတယ်။ Snail ကိုတန်ဖိုးထားလေ Snailက သင့်ကို အလှဂုဏ်တင့်စေလေပါပဲနော်။ Snail ကိုသင်ရွေးချယ်မိလို့ နောင်တမရစေရပါဘူး Snail ကအရမ်းသစ္စာကြီးမားလှတယ်ဆိုတာ သုံးဖူးသူတွေ လက်ခံကုန်ကြပီလေ Snail က ပွဲလယ်တင့်စေမှာပါ 50g ဘူးကြီး 29500ကျပ် 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
ပြစ်မျိုးမဲ့မထင် လှချင်တယ်ဟုတ် အဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေ ပြည့်စေဖို့ Snail လိမ်းကြစို့နော် Snail Mucus ကအရေပြားအစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ဖြည့်တင်းပေးတော့ မွဲမွဲခြောက်မျက်နှာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ အရည်သွေးမြင့် Vita Collagen အပြည့်အဝပါဝင်တာကြောင့် ရေရှည်အသုံးပြုမယ်ဆို အသားအရေစိုပြေပြီးတင်းရင်း‌ ချောမွေ့မှု နုပျိုစေအုံးမှာပါ အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကအမည်းစက် ဝက်ခြံအမာရွတ် နေလောင်အမဲကွက်တွေပျောက်ပြီး အရေပြားအိုမင်းခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးတော့ အတွေးမမှားနဲ့တော့နော် Crd 🌟 star5g 3500 ( အစမ်းသုံး ) 50 g 29500 ( တစ်ဝကြီးနဲ့ အကြာကြီးသုံး ) 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
😍 Korea မှာစနစ်တစ်ကျထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Snail Care​ လေးပါနော်🙂 ပြောချင်တာက.......👇👇👇 New skiin ဘာလို့ ခနအတွင်း ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်လည်းဆိုတာ Real သုံးနေတဲ့ Customers တွေရဲ့ စကားလေးတွေကအသက်ပါနော် တန်ဖိုးထားပါတယ် ချစ်တဲ့ Customers တို့ရေ😘😘😘 Feedback လေးတွေမှပြောသော စကားများ အပိုင်း (၁) New skiin လေးကြောင့် 👉အဆီဖုတွေ သက်သာလာပါတယ်တဲ့ 👉မျက်နာလေးစိုအိတင်းလာပါတယ်တဲ့ 👉မနက်ရော ညရော သုံးနေပါပီတဲ့ 👉အရမ်းတွေအဆင်ပြေလို့ပါတဲ့ 👉သူတမျိုးတည်းနဲ့တနေကုန်အဆီမပြန်ပဲလှနေလို့ပါတဲ့ 👉ရုံးသွားကျောင်းသွား new skiin လေးပဲလ်ိုတာပါတဲ့ 👉အထုတ်လေးစမ်းကျိတာနဲ့ကိုကျေနပ်လို့သုံးနေတာတွေ ဝဲ ပစ်လတ်ပါပီတဲ့နော် 👉new skiin လေးက အသက်ပါတဲ့ သုံးဖူးသမျှ အကြိုက်ဆုံးပါတဲ့နော် #New Skiinအထုပ် 5g 3500ks အထုပ် 20မှစလက်ကားစျေးပေးသည် #Snail Wish ဗူး 50g 29500ks ဗူး ၅ဗူးမှစ၍ လက်ကားစျေးပေးသည်။ 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
First Page « 172 173 174 » Last Page